Football Khabar » कोपा अमेरिका फाइनल : पहिलो हाफमा ब्राजिललाई २–१ को अग्रता !
कोपा अमेरिका फाइनल : पहिलो हाफमा ब्राजिललाई २–१ को अग्रता !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा अहिले उपाधि भिडन्तमा आयोजक ब्राजिल र पेरू खेलिरहेका छन् । खेलको पहिलो हाफमा घरेलु टोली ब्राजिलले २–१ को अग्रता लिएको छ ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको पहिला हाफमा ब्राजिलका लागि खेलको १५औं मिनेटमा एभर्टन स्वोरेजले निकै दर्शनीय गोल गरेका थिए । बक्सको तल्लो क्षेत्रबाट ग्याब्रिएल जेससले दिएको पामा अनमार्क रहेका एभर्टनले वान टचमै बललाई जाली चुमाएका थिए ।
त्यसपछि ४४औं मिनेटमा पेरूले पेनाल्टी पायो । बक्समा क्षेत्रमा थियागो सिल्भाले ह्यान्ड बल गरेपछि पााएको पेनाल्टीमा पेरूका लागि पाओलो गुरेरियाले कुनै गल्ती नगरील गोल गरेर खेल १–१ बनाए । तर, इन्जुरी समयमा जेससले गोल गर्दै ब्राजिललाई २–१ को अग्रता दिलाए ।
त्यसबाहेक ब्राजिलले पहिलो हाफमा तुलनात्मक रूपमा गोलका बढी अवसर बनायो । यता, पेरूले जम्मा ब्राजिलको पोस्टमा कुनै पनि प्रहार पोस्टको दिशामा राख्न सकेन ।
प्रकाशित मिति २२ असार २०७६, आईतवार २०:४७